Dalabka dameeraha ee Shiinaha oo Soomaalida halis ku haya - BBC News Somali
Dalabka dameeraha ee Shiinaha oo Soomaalida halis ku haya
Image caption Shiinaha ayaa horey dameero badan uga qaatay Koonfur Afrika
Dadka ku nool magaalada Gaarisa ayaa walaac badan ka muujinaya dameeraha oo si xowli ah looga iibsado suuqa xoolaha ee magaaladaasi.
Dameeraha oo qaarkood laga soo safriyo Soomaaliya ayaa suuq fiican ka helay kawaan ku yaalla magaalada Limuru ee ku taalla dalka Kenya, kawaankaasi oo lagu qalo dameeraha kaddibna hilibkooda loo dhoofiyo dalka Shiinaha.
Arrintan ayaa keentay in culimada Gaarisa ay masaajidda ka sheegaan in ay xaaraan tahay in laga ganacsado dameeraha gawraca loo wado, waxaana jirta cabsi ah inay ka dabar go'i karaan deegaanka.
Wariyaha BBC-da Bashkas Jug soo dhacay ayaa booqday suuqa xoolaha ee magaalada Gaarisa wuxuuna sheegay xoolaha sida weyn looga kala iibsado suuqa ay u badan yihiin dameero.
Dameero ku -dibedbaxay- Nairobi
Shacbaka ku nool magaalada Gaarissa ayaa ka cabsi qaba in gobolka gabi ahaanba laga waayo dameeraha maadaamaa si aad ah suuqa loo geeyo islamarkaana loo sii qaado gudaha dalka Kenya.
Image caption Dameero suuqa xoolaha Gaarisa loo iibkeenay
Iidle Khaliif Buulle o ka mid ah dadka xoolaha ku kala iibiya suuqa xoolaha, muddo badanna ka shaqeynayey ayaa yidhi: "Dameeraha waaba la wayey, wax la soo gato waa laga la'yahay baadiyaha, wax la dhaansado ama lagu guuro ayaaba la la'yahay hadda"
"Dameeraha markii la ogaaday in lacag laga helayo magaalada oo dhanbaa ku dhaqaaqday mid soo xado iyo mid lahaaba suuqa ayaa la wada keenay dameer kuma dambeeyo baadiyaha" ayuu sii raaciyay hadalkiisa.
Sida ay sheegeen shaqsiyaadka muddada badan ka soo shaqeeynayey kala iibinta xoolaha suuqaasi la keeno, waxaa maalinti suuqa laga raraa shan ilaa lix gaari oo dameero ah, dameeraha markay ku yaraadeen suuqa Gaarisa na waxaa loo raadiyaa Soomaaliya.
Jasiiradda ‘Boqortooyada’ dameeraha
"Waagi hore dameerka waxaa lagu gadi jiray 4,000 ilaa 6,000 oo shilinka Kenya ah oo u dhigma ($40 ilaa $60) doolar, hadda waxaa lagu kala gataa 18,000 ilaa iyo 20,000 oo shilinka kenya oo u dhigma ($180 ilaa $200) oo doolar, qiimaha dmeerahana kor ayuu u sii socdaa" ayuu yiri Qaasim Nuuriye Muxumed oo muddo ka shaqeynayey suuqa xoolaha Garisaa.
"Haddii ay dowladdu wax ka qaban weydo arrintan mudda yar dabadeed waa la waayi doona wax dameer la yirahdo" ayuu yidhi Qaasim.
Image caption Dameero suuqa loo iibkeenay
Culimada ku nool magaalada Gaarissa ayaa billaabay iney ka hadlaan in la joojiyo ka ganacsiga Dameeraha, iyaga oo si gaar ah ganacsatada ku howlan ka ganacsiga dameeraha farriin u diray.
Shekh Cali Guure oo ka mid ah culimada magaalada Gaarissa oo arrintan ka hadlayey ayaa yiri "Horta dameeraha waxay ka mid yihiin xoolaha uu ilaahey na siiyey inaan isticmaalno in laga ganacsado oo la iibiyo ama la soo iibsado diiniyan xaaraan ma aha."
"Keli ah waxay xoolaha kale kaga duwan yihiin hilbkoodana lama cuno, caanahoodana lama listo, laakiin waxaa xaaraan ah in hilibkoodi la xarrimay la banneysto oo la iska qalqasho, mar haddii kawaanno lagu qalo la furay dadka qalayana ay yihiin dad aan Islaam ahayn muslimiintana ay ogaadaan dameeraha la iibsanayo in la qalayo iney dadkaasi dambiga iyo xaaraanta ugu kaalmeeyaan waa xaaraan oo ma bannaana" ayuu yiri Shekh Cali.
"Maalinti la joogay dagaalki Kheybar dameeraha iyada oo la qalanayo oo hilibka uu karayo ayuu sharciga xarrimaya soo dagay oo la yiri Alle iyo Rasuulkiisa wey xarrimeen hilbka dameeraha hilibki dameeraha ee dabka saarnaa oo dhanna waa la daadiyey, ayuu yiri."
Lahaanshaha sawirka QUARTZ AFRICA
Image caption Dmeeraha dhaan lagu sido
"Dameeraha madaama ay tiradooda yartahay faracooduna uu yar yahay haddii la wada iibiyo gaadiid la'aan ayaa dhaceysa oo bulshada iyo dadka danyarta ah ee ku nool miyi iyo magaalaba wey gaareuysaa dhibaatada, marka haddii la farac gooyo waa dhibaato kale oo Muslimka loo geysanaya."
"Mar haddey caddaato in dameeraha la qalanayo oo ay agtaada ku caddaato inaad adigu iibgeyso oo aad ka gancsato waa xaaraan, lacagtaad ka qadaneysana waa xaaraan, ficilkaad ku jirtidna waa xaaraan sida ay culimada isku raaceen" ayuu yiri Shekh Cali Guure oo ka mid ah culimada magaalada Gaarissa oo BBC u warramay.
Image caption Suuqa xoolaha Gaarisa dameero la iibiyey
Warbaahinta Kenya waxay marar badan ka warrameen in waddamo badan oo qaaradda Afrika ku yaalla laga mamnuucay in dareemaha la qalo, halka ay Kenyana sii laba jibbaartay qalliinka dameeraha iyada oo hilibka dameeraha u dhoofisa dalka Shiinaha.
Sanadihi ugu dambeeyey waxaa qaaradda Afrika kor uga soo kacayey hilibbka iyo hargaha dameeraha ee loo dhoofiyo dalka Shiinaha taasoo ay khubarada ku tilmaameen halis soo food saartay beeraleyda iyo dadka dan yarta ah ee qaaradda Afrika ee dameeraha ku intifaaca.
Gaarissa:Sicirka dameeraha oo sare u kacay
Hay'ad u doodda arrimaha xayawaanka ayaa sheegtay in qiimaha dameeraha ee Kenya uu seddax jibbaarmay lixdii bilood ee la soo dhaafay.
Taas ayey sheegeen inay sabab u tahay dalabka Shiinaha oo batay, halkaas oo dameeraha looga adeegsado dawo dhaqameed.
Image caption Suuqo xoolaha Gaarisa
Sidoo kale, Shiinaha waxaa laga cunaa hilibka dameeraha oo loo arko mid aad u macaan.
Tirada dameeraha ku nool Shiinaha ayaa aad hoos ugu dhacday, waxayna taasi soo jiidatay suuqa Bariga Afrika, sida ay sheegtay hay'adda u doodda xuquuqda xayawaanka ee fadhigeedu yahay dalka Uganda.
Haragga dameeraha ayaa sidoo kale la kariyaa, waxaana laga soo saaraa maado loo yaqaano Gelatin, oo ah dawo dhaqameed Shiinaha looga garanayo Ejiao.
Waxaa maaddadaas lagu daaweeyaa Hargabka, dhiig-yaraanta iyo Caado wareerka, waxaana lagu iibsadaa illaa $388 dollar, kiiladii.
Dalal dhowr ah oo ka tirsan Afrika ayaa mamnuucay in dameeraha loo dhoofiyo Shiinaha, waxayna sheegeen in Suuqyada gudaha ay saameyneyso.
Waxaa lagu warramayaa in dameeraha qaar laga soo qaado dalalka deriska la ah Kenya, oo la qalo ka dibna Shiinaha loo dhoofiyo.
Dalalka mamnuucay waxaa ka mid ah Uganda, Tanzaniya, Botswana, Niger, Burkina Faso, Mali, iyo Senegal.